ထွက်ရန်အကြောင်းပြချက်များ - 802Quit
ပင်မစာမျက်နှာ » ဗားမောင့် » ဖြတ်ဖို့အကြောင်းပြချက်
ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်၊ vaping လုပ်ရန်သို့မဟုတ်အခြားဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းများသုံးစွဲရန်အကောင်းဆုံးအကြောင်းရင်းကားအဘယ်နည်း။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည်။ သူတို့အားလုံးကောင်းတယ်။ ပြီးတော့မင်းဟာတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်သို့မဟုတ်အခြားဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းများသုံးစွဲရန်အကြောင်းများစွာရှိသည်။ စီးကရက်၊ အီးစီးကရက်သို့မဟုတ်အခြားဆေးရွက်ကြီးဖြတ်ခြင်းသည်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေရုံသာမကသင်၏ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးလေ့ကျင့်ခန်းကဲ့သို့သောအခြားကျန်းမာရေးအလေ့အထများတွင်ပါ ၀ င်ရန်စွမ်းအင်ပိုမိုပေးနိုင်သည်။
လူများစွာသည်ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးနောက်ကိုယ်အလေးချိန်တက်ရန်စိုးရိမ်နေကြသော်လည်းဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားဆေးရွက်ကြီးဖြတ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်မည်မျှလုပ်ဆောင်နေကြောင်းကိုမှတ်ထားရန်အရေးကြီးသည်။ ဆေးလိပ်သောက်လို့ပဲ တစ်ကိုယ်လုံးကိုသက်ရောက်မှုရှိသည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအကျိုး။
သင်သည်ကိုယ်အလေးချိန်တက်ရန်စိုးရိမ်နေပါက (သို့) သင်၏ဂရုမစိုက်မှုကိုရပ်တန့်ရန်အဘယ်အရာစားရမည်ကိုလေ့လာလိုပါကကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာခြင်းကိုကာကွယ်ရန်နှင့်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုသည့်အကြံပြုချက်အချို့ကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
သင်ကိုယ်တိုင်တစ်ခုခုငြင်းပယ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်အစာကျွေးခြင်းအကြောင်းမဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအစားအစာများသည်ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ရုံသာမကအရသာရှိနိုင်သည်။ 1 2
သင်အမှန်တကယ်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းမရှိစေရန်သင်၏အစားအစာများနှင့်ကျန်းမာသောရေစာကိုစီစဉ်ပါ။ (ဆာလောင်နေချိန်မှာကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစာတွေကိုဖမ်းဖို့အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ )
သင်နှစ်သက်သောကျန်းမာသောမုန်လာဥစာရင်း (ဥပမာ - နေကြာစေ့၊ သစ်သီး၊ unbuttered popcorn, ဒိန်ခဲပါသည့် wholegrain crackers၊ မြေပဲထောပတ်နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်)
ရေများများစားစားသောက်ပါ၊ အရက်၊ ကြံ၊
သင့်ရဲ့အရွယ်အစားကိုကြည့်ပါ။ ကျန်းမာသောအစာစားစားပွဲ2 အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းသင့်ရဲ့အရွယ်အစားကိုစီစဉ်နိုင်ပါတယ်။
သင်၏ညစာပန်းကန်တစ်ဝက်သည်သစ်သီးများသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြစ်ရန်ပန်းကန်၏ ၁/၄ သည်ပိန်သောပရိုတင်းဖြစ်လိမ့်မည် (ဥပမာ၊ ကြက်၊ မုန့်ဖုတ်ထားသောငါး၊ ငရုတ်သီး) နှင့်ပန်းကန်၏ 1/4 သည်ချိုသောအာလူးသို့မဟုတ်အညိုရောင်ဆန်ကဲ့သို့သောကျန်းမာသောကာဗွန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင့်တွင်ချိုမြိန်သောသွားတစ်ချောင်းရှိပါကအချိုပွဲကိုတစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သာကန့်သတ်ပြီးအချိုပွဲ၏အရွယ်အစားကိုကန့်သတ်ပါ။ လတ်ဆတ်သောအသီးကိုသီးအပိုင်းအစ, မှောင်မိုက်ချောကလက်6ရင်ပြင်) ။ “ ကျန်းမာသောအချိုပွဲစိတ်ကူးများ” အတွက်အင်တာနက်ကိုရှာဖွေပါ
လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ငန်း၊ ခြံစောင့်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ကခုန်ခြင်း၊ အလေးမခြင်း၊ တွန်းလှန်ခြင်း၊1:
ဆီးချိုရောဂါကာကွယ်ရန် (သို့မဟုတ်ဆီးချိုရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်စေရန်) သကြားဓာတ်အဆင့်ကိုလျှော့ချသည်။
သင်တစ်နေ့လျှင်တစ်နာရီမပြည့်မှီသင်နေ့စဉ်ပြုလုပ်နေသည့်အရာအတွက်နောက်ထပ်မိနစ် ၅ မိနစ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ရန်ရည်မှန်းချက်ကိုသတ်မှတ်ပါ။ သတိရပါ၊ ကာယလှုပ်ရှားမှုသည်ချွေးထွက်အောင်လုပ်ရန်သင့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောမည်သည့်အရာမဆိုဖြစ်နိုင်သည်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည်ဆေးရွက်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဲ့သို့ပင်ပျောက်ကွယ်ရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ စီးကရက်၊ အီလက်ထရောနစ်စီးကရက်သို့မဟုတ် vaping ဘောပင်များကိုထိုလက်ဖြင့်ပါးစပ်အလေ့အထကိုဖြည့်တင်းရန်အစားထိုးရန်သွေးဆောင်သည်။ ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲသူအချို့သည်ကောက်ရိုးသို့မဟုတ်သကြားမပါသောသွားဖုံးပေါ်တွင်ဝါးစားခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့လက်များကိုရယူရန်အသစ်သောအရာတစ်ခုခုလုပ်ခြင်းသည်အထောက်အကူပြုသည်။
အပိုပေါင်အနည်းငယ်ရခြင်း၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကသင့်အားဆေးလိပ်မဖြတ်ရန်မတားဆီးပါနှင့်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ဘဝကိုနှစ်ပေါင်းများစွာထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်လုပ်ဆောင်ရုံသာမကသင်၏ဘဝအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေပြီးပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများကိုဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာမှာကိုစိုးရိမ်လျှင်သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်စကားပြောရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်။
သင့်အိမ်ထောင်စုရှိလူအားလုံးအတွက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည်ကျန်းမာရေးမကောင်းပါ။ သို့သော်၎င်းသည်အဆုတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဆဲကလေးများနှင့်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ ကင်ဆာ၊ COPD နှင့်နှလုံးရောဂါရှိသူများအတွက်အထူးသဖြင့်အန္တရာယ်ရှိသည်။ အမှန်မှာ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်တစ်ပတ်ရစ်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဖြစ်စေသည့်အရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကပြောကြားသည် အဘယ်သူမျှမ တစ်ပတ်ရစ်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကင်းသည့်အဆင့်။ မည်သူမဆိုဆေးလိပ်သောက်သုံးခြင်းနှင့်ပတ်သတ်လျှင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကဲ့သို့ပင် ဒုတိယအကြိမ်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းတိုတိုသည်ပင်လျှင်နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်း၊
ကလေးများနှင့်ကလေးငယ်များတွင်အဆုတ်သေးသေးလေးများရှိနေသေးသည်။ သူတို့သည်ဆေးလိပ်ငွေ့အဆိပ်သင့်ခြင်းထက် ပို၍ ပင်အန္တရာယ်ရှိသည်။
ကလေးများသည်မီးခိုးများရှူရှိုက်မိသောအခါ၎င်းသည်သူတို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသူတို့နှင့်အတူရှိနေသောကျန်းမာရေးပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ယင်းတို့တွင်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ bronchitis, pneumonia၊ နားမကြာခဏရောဂါကူးစက်မှုများနှင့်ဓာတ်မတည့်ခြင်းကဲ့သို့သောပြproblemsနာများပါဝင်သည်။
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ ဓာတ်မတည့်ခြင်း (သို့) bronchitis ရောဂါခံစားနေရသောလူကြီးများအတွက်၊ တစ်ရှုးဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကရောဂါလက္ခဏာကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။
မိဘများသို့မဟုတ်စောင့်ရှောက်သူများကဆေးလိပ်သောက်သည့်ကလေးငယ်များသည်ရုတ်တရက်မွေးကင်းစကလေးငယ်သေချာသောရောဂါ (SIDS) မှနှစ်ဆပိုများသည်။
ဆေးလိပ်မီးခိုးငွေ့ကြောင့်မတော်တဆထိတွေ့ခြင်း၏ကျန်းမာရေးအကျိုးဆက်များ - အထွေထွေခွဲစိတ်ဆရာ ၀ န်၏အစီရင်ခံစာ
သင့်မိသားစုသည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အီလက်ထရောနစ်စီးကရက်သို့မဟုတ်အခြားဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းများအားဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်သင့်အားအဓိကလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။ သင်၏ထွက်ခွာသွားသည့်အားထုတ်မှုများတွင်သူတို့ကိုအားပေးထောက်ခံပါစေ။
ကျွန်တော့်သမီး ၃ ယောက်၊ ခင်ပွန်းနဲ့မြေး ၂ ယောက်ဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရောဂါကြောင့်သေဆုံးရတာကိုကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်မကြည့်ချင်ကြဘူး။ စီးကရက်မပါဘဲအရက်သုံးဆယ်နှင့်နောက်ထပ်အသက်ရှင်ရန်ရက်များစွာ! ငါမပျော်ဘူး 🙂
နာမကျန်းဖြစ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရောဂါရှာဖွေခြင်းသည်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်သို့မဟုတ်အခြားဆေးရွက်ကြီးထွက်ရန်အစီအစဉ်သို့ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းများလှမ်းရန်သင့်အားလှုံ့ဆော်ပေးသည့်ကြောက်စရာနိုးထစေသောခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းသည်သင်၏ရောဂါကိုပိုကောင်းစေနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်နိုင်မည်လား၊
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၇ နှစ်ကငါနုတ်ထွက်လိုက်တဲ့အခါငါကနုတ်ထွက်ဖို့ကြိုးစားတာကိုပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါနောက်ဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်။ နာတာရှည် bronchitis နှင့်အစောပိုင်းအဆင့် emphysema နှင့်အတူသိလိုက်ရတယ်, ငါကငါ့နောက်ဆုံးသတိပေးချက်ဖြစ်ခဲ့သည်သိတယ်။ ငါအဆုတ်ကင်ဆာရှိတယ်လို့ငါ့ကိုမပြောခဲ့တာဘယ်လောက်ကံကောင်းတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်
သင်သို့မဟုတ်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင်သို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်စဉ်းစားပါကယခုဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်၊ သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင့်ကလေးကိုပေးနိုင်သည့်လက်ဆောင်တစ်ခု.
ဆေးလိပ်မသောက်ဘဲ ၁ ရက်အကြာတွင်ပင်သင့်ကလေးကိုအောက်စီဂျင်ပိုမိုပေးသည်
နားတွင်ရောဂါကူးစက်မှု၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ bronchitis နှင့် pneumonia ရုတ်တရက်မွေးကင်းစကလေးငယ်သေဆုံးသည့်ရောဂါ (SIDS) ၏အန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။
သငျသညျနှလုံးရောဂါ, လေဖြတ်ခြင်း, အဆုတ်ကင်ဆာ, နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါနှင့်အခြားမီးခိုးနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နည်းပါးလာလိမ့်မယ်
ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်နှင့်အခြားဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်နှင့်ဝင်ငွေထွက်ရန်အခမဲ့စိတ်ကြိုက်အကူအညီကိုရယူပါ လက်ဆောင်ကဒ်ဆုလာဘ်! ခေါ်ပါ 1-800- အတော်လေး NOW က အထူးလေ့ကျင့်ထားသောကိုယ်ဝန် Quit Coach နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်နှင့်အပြီး၌အကြံပေးခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုစီအတွက်ဒေါ်လာ ၂၀ သို့မဟုတ်ဒေါ်လာ ၃၀ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူပြီးဆုများစတင်ရယူပါ.
ချစ်ရသူတစ် ဦး ဆုံးပါးသွားခြင်းသည်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်အရေးကြီးသောတွန်းအားဖြစ်သည်။ ဗားမောင့်ဝန်းကျင်ရှိအခြားသူများသည်ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ် ဦး ၏ဘဝကိုလေးစားရန်ဆေးလိပ်ဖြတ်ကြသည်။
ကျွန်တော့်အဖေကဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးပြfromနာအားလုံးမှသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော့်အမေကအသက်ရှင်နေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမဲ့သူမဆေးလိပ်သောက်တာကြောင့်နှလုံးခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့တယ်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တွင်ဆေးလိပ်နှင့်ဆက်စပ်သောကျန်းမာရေးပြissuesနာများလည်းရှိသည် - အရိုးပွရောဂါ၊ ကျွန်ုပ်၏အသံကြိုးများပေါ်ရှိ polyps နှင့် COPD ။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးနေ့ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်တကယ်ကောင်းသော၊ အားကောင်းသောခံစားမှုဖြစ်သည်။ ငါဒီလိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာငါသိတယ် ငါလုပ်ဖို့ထိုက်ကိုငါသိ၏။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း၊ vaping သို့မဟုတ်အခြားဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းများထွက်လျှင်သင်ကျန်းမာရေးချွေတာခြင်းမဟုတ်ပါ။ စီးကရက်သို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်စီးကရက်များတွင်ငွေမသုံးသောအခါ၊ ဆေးရွက်ကြီးဝါးခြင်း၊ သွေ့ခြောက်ခြင်းသို့မဟုတ် vaping အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများမရသောအခါသင်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရ။ သင်အံ့သြသွားပါလိမ့်မည်။
တစ်နေ့ထုပ်တစ်ရက်ကိုကျွန်တော်ဆေးလိပ်သောက်ခဲ့ဖူးတယ်၊ အဲဒါကတော်တော်ဈေးကြီးနေတယ်။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆေးလိပ်ဖြတ်တဲ့အခါမီးဖိုချောင်ထဲမှာတစ်နေ့ကိုဒေါ်လာ ၅ ဒေါ်လာထည့်ခဲ့တယ်။ အခုကျွန်တော် ၈ လနုတ်ထွက်လိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်အပြောင်းအလဲတော်တော်လေးကောင်းလာပြီ။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့တစ်နှစ်လုပ်လိုက်ရင်ငါ့သမီးကိုပိုက်ဆံနဲ့အားလပ်ရက်ယူမယ်။
ယနေ့ 802Quits နှင့်အတူစိတ်ကြိုက်ဆေးလိပ်ဖြတ်အစီအစဉ်ကိုဖန်တီးပါ။